စမတ် စက်တပ် rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် စက်တပ် rotary actuator
စမတ် စက်တပ် rotary actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး စမတ် စက်တပ် rotary actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် တွင် ဖြစ်စဉ် technology.Our ထုတ်ကုန် များမှာ မဟုတ် သာ အဆိုပါ အခင်အရှင် စက်နှင့်ဆိုင်သော တွင်terface, ဒါပေမဲ့ လည်း အဆိုပါ ဝေဖန် တွင်terface တွင် အဆိုပါ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ အဆိုပါ ခေတ်သစ် AOX-R ကို ကို စီးရီး စမတ် စက်တပ် rotary actuaသို့r ထိန်းချုပ်မှု ယူနစ် တွေ့ဆုံ အဆိုပါ လုံခွုံရေး ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ ၏ အဆိုပါ ယေဘုယျ လယ်ယာ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်။ ကှေးနိုငျသော ပစ္စည်းကရိယာ တည်နေရာ နှင့် configuration များ သို့ တှေ့ဆုံ အမျိုးမျိုးသော တွင်stallation လိုအပ်ချက်များကို။
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ၏ shell ကိုစီးရီးစမတ်မော်တော် rotary actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. Multi-ဗို့: AOX-R ကိုစီးရီးလေးပုံတပုံအလှည့် actuator ၏ဗို့အား 220VAC, 380VAC, 110VAC နှင့် 24VDC နိုင်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်မော်တော် rotary actuator များအတွက် 3. ရိုးရှင်းသောလက်စွဲဖွဲ့စည်းပုံမှာ: အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး Spanner နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ITA, ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရ, အလုပ်သမား-saving ့။
AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်မော်တော် rotary actuator အသုံးပြုမှုကိုရွှေချထားတဲ့ plug-in.It plug-in ကိုမြင့်မားစီးကူး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချေးခုခံနှင့်ဓာတ်တိုးခုခံမြင့်မားတည်ငြိမ်ရေးကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ အမိန့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်း, လုံခြုံခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း team.It တည်ထောင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်မော်တော် rotary actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်မော်တော် rotary actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ဖြေကျနော်တို့ Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းဖို့ကုန်စည်တင်ပို့ရန်နိုင်ပါတယ်။
မေး: သင်ငါ့ကို AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်မော်တော် rotary actuator anout ပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
hot Tags:: စမတ် စက်တပ် rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်